Ihe nlere nke ụgbọ ala na-elekwasị anya site na nọmba nke kilomita! Ihe nlere nke ụgbọ ala na-elekwasị anya site na nọmba nke kilomita! - LFOTPP
Ihe nlere nke ụgbọ ala na-elekwasị anya site na nọmba nke kilomita!
Ọtụtụ ndị nwere ụgbọ ala maara na ọ bụ naanị mgbe ejiri ụgbọ ala ahụ ka arụ ọrụ, enwere ike ikwe nkwa ịrụ ọrụ nke ụgbọala ahụ agaghị eme agadi ngwa ngwa. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ndị ọhụụ na amabeghị usoro ngbanye ụgbọ ala bụ. Ọtụtụ ndị na-eche na afọ nke ụgbọ ala na-ekpebi usoro mmezi nke ụgbọ ala. N’ezie, mgbe mmezi ụgbọala, ọnụ ọgụgụ kilomita ole gara njem bụ uru kachasị mkpa!
Nke mbu, ihe eji agbazi ugbo ala bu ihe jikọrọ ya na afo na ihe di egwu
Ka emechara azụghachi ụgbọ ala ahụ, ụfọdụ ndị nwere ụgbọ ala anaghị eji ụgbọ ala mgbe ụfọdụ, ụfọdụ ndị nwe ụgbọ ala na-akwọkarịrị awa karịa 10 kwa ụbọchị. Ya mere, usoro mmezi ahụ dịgasị iche iche n'ọnọdụ dịgasị iche iche. Ọ bụrụ na agbakọọ afọ ụgbọ ala iche iche, ọrụ ụgbọ ala nke nke mbụ ga-akarị nke ukwuu, nke ikpeazụ ga-adị obere. Iji dozie nsogbu ndị dị otú ahụ, ndị na-emepụta ihe, ngalaba ule ụgbọ ala, wdg, site na nyocha dị ogologo oge, mbanye ule, gbakọọ ụkpụrụ nke kilomita ndị na-elekọta ụgbọ ala. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, a na-ejikọkarị usoro n ’ụgbọ ala ahụ na-aga ma ọ bụrụ na ọ dị nso na ụgbọ ala.
Ihe dị iche n'etiti obere mmezi na nnukwu mmezi: obere mmanụ ndozi na nzacha mmanụ, nnukwu mmezi ya dịkwa mkpa ịgbanwe ihe nzacha atọ na plọg.
N'ozuzu, mmezi nke ugbo ala ekewa n'ime obere mmezi na nnukwu mmezi. “Obere mmezi” na-ekwu maka idozi ụgbọala mgbe niile iji hụ na arụmọrụ nke ụgbọala ahụ, gụnyere ndochi mmanụ, mmanụ na nyocha ya.
Injin nke ụgbọ ala chọrọ lubrication. Mmanụ na-arụ ọrụ nke lubrication, ihicha, akara ya na jụrụ. Agbanyeghị, ka ụgbọ ala na-anya, mmanụ mmanụ na mgbakwunye mmanụ ahụ ga-emebi ma daa. Ya mere, iji chedo injin ahụ, a ga-agbanwe mmanụ ahụ mgbe niile. .
“Nnukwu mmezi” bụ obere mmezi, na mgbakwunye na ndochi mmanụ ahụ dịkwa mkpa iji dochie ihe nzacha atọ na ebu. Ihe nzacha atọ ahụ bụ nzacha ikuku, nzacha mmanụ na nzacha mmanụ ọkụ. A na-eji nzacha ahụ iji hichapụ adịghị mma, ihe nzacha atọ ahụ na-arụ ọrụ na-enyocha ájá dị n'ikuku, sludge na mmanụ na carbon, yana adịghị ọcha na mmanụ ọkụ. Na mgbakwunye, mgbe ọ gbasịrị ogologo dị anya, ụgbọ ala ahụ kwesịrị iji dochie ihe ndị dị mkpa dị ka mmiri breeki, nkwanye ọkụ, mmanụ nnyefe, na eriri eriri oge.
Obere mmezi na nnukwu mmezi na-agbanwe dịka oge ụfọdụ. Usoro ngbanwe ọzọ nke ụdị nke ụdị ọ bụla dịtụ iche, ihe ndozi dị iche.
Ọtụtụ ụgbọ ala ụlọ na-eme obere mmezi kwa kilomita ọ bụla nke 7,000, a na-arụkwa nnukwu nchekwa na gburugburu 14,000 kilomita.
Na mkpokọta, ụzọ dị iche iche esi arụzi ụgbọala nke ndị ụlọ mebere n'obodo ha bụ kilomita 7,000 nke obere mmezi. Ihe njikọ ndị kachasị mkpa bụ ịgbanwe mmanụ ahụ, lelee ngwaọrụ nchịkwa, ọkụ, mmanụ breeki ma hichaa ihe nzacha atọ ahụ n'otu oge. Drivegbọala dị ihe dị ka 14,000 kilomita maka nnukwu mmezi. Ọrụ dị mkpa bụ mmezi gụnyere: ịgbanwe mmanụ ahụ, inyocha akụrụngwa, dochie oghere breeki, na dochie ihe nzacha atọ ahụ. N’ezie, usoro iwu ụgbọ ala dị iche iche dị iche iche dịkwa iche iche, ụfọdụ ụgbọ ala erughị 7000 kilomita, ụfọdụ ụgbọ ala dịkwa elu karịa kilomita 7000, na-ekwu n’ozuzu, akwụkwọ ntuziaka ụgbọ ala nwere okwu mmeghe zuru ezu.
Ọ bụrụ na edozighi ụgbọ ahụ n'oge maka ndozi, arụmọrụ nke ụgbọ ala ahụ ga-ada ngwa ngwa, iyi ahụ ga-abawanye, ọbụnakwa na-emebi emebi. Naanị idozi ụgbọ ala n'oge kwesịrị ekwesị bụ mkpebi kachasị. N'ime usoro mmezi ụgbọ ala, na mgbakwunye mmezi a na-eme kwa ụbọchị dịka ihe edepụtara, ịkwesịrị ị paya ntị na akụkụ niile nke nkọwa ahụ, ma ọ bụghị ya nwere ike iweta mbibi ahụ karịa ụgbọ ala ahụ, na-ebute ụgwọ mmezi adịghị mkpa.
Nke abuo, ihe nlere ubochi n’atuputa ihe kpatara odida ugbo ala, ihe ato iji dozie ihe asaa, uzo nlezi anya na uzo idozi di iche di iche.
Na mkpokọta, nsogbu nke nsogbu ọgbụgba ụgbọ ala na-abawanye na mmụba nke afọ na ọnụ ọgụgụ kilomita. Dabere na nyocha data, ọdịda ọdịda nke ụgbọ ala n'okpuru afọ 3 bụ naanị 31.04%, na ọdịda ọdịda nke ugbo ala n'ime afọ 6-10 ga-erute larịị, na ọdịda ọdịda nke ugbo ala karịa afọ 15 dị elu dịka 180 %. Nke ahụ bụ na, site na mmụba nke afọ ụgbọ ala na ọnụ ọgụgụ ndị kilomita na-eme njem, mmezi nke ụgbọala abụghị ọrụ mmezi a na-eme mgbe niile, kamakwa a na-edochi akụkụ ụfọdụ na iyi ihe mgbe niile.
Afọ 1-4 afọ: n'oge uto, na mgbakwunye na mmezi nkịtị, ịkwesịrị ị attentiona ntị iji dochie ụfọdụ akụkụ furu efu.
Afọ abụọ mbụ eji ụgbọ ala bụ ọnụ ọgụgụ kacha elu nke ndụ. Ọ bụrụhaala na a na-arụzi oge niile, nsogbu agaghị enwe isi, mana mgbe ihe karịrị afọ abụọ gasịrị, ụgbọ ahụ ga-amalite dochie ụfọdụ akụkụ ahụ dị egwu.
Mpempe breeki: Mgbe afọ abụọ ruo atọ jiri ụgbọ ahụ, ọ dị mkpa iji dochie paịlị ọhụụ dịka ọ na-aga iji hụ na ụgbọala na-arụ ọrụ n'ọnọdụ nkịtị. Ndị nwe ụgbọ ala nkịtị ga-ahụkwa na mgbe ị na-arụzi ọrụ ma ọ bụ na-arụzi ya, a ga-enyocha ya maka nnọchi breeki, n'ihi na ọ bụ akara nchekwa izizi maka nchekwa ịkwọ ụgbọala. Dabere na ahụmịhe, n'ọnọdụ ọnọdụ ịnya ụgbọ ala nkịtị, breeki a ga-agwụ ike ihe dị ka afọ abụọ. N’ezie, oge ihe eji arụ ọrụ na-adabere n’omume onye ọkwọ ụgbọala na oge ọkwọ ụgbọala. Ọ bụrụ na ị bụ ụdị mmadụ na-enwe mmasị ịbanye na ome osooso ma belata na breeki, paịads nwere ike na-eyi karịa na ndụ ga-adị mkpụmkpụ.
Mmanụ mgbapụta: Ọrụ nke mgbapụta mmanụ a bụ iji kpoo mmanụ ahụ n'ite mmanụ, kpoo ya ma bute ya na paịpụ mmanụ ọkụ, wee soro onye na-ahụ maka mmanụ ọkụ rụpụta otu mmanụ ọkụ. Mgbe emepere ụgbọ ala ihe karịrị afọ abụọ, o kwesịrị ka ekpochapu mmanụ ma ọ bụ dochie ihe mgbapụta mmanụ.
Shock Absorber: Mgbe ụgbọ ala ahụ nọ na-akwọ ụgbọala afọ atọ ma ọ bụ anọ, ọ nwere ike ịdị ka nke ọma dị ka ọ nọghị n'ụgbọ ọhụrụ. Ọ bụrụ na nke a, buru ụzọ chọpụta ihe na-adọrọ adọrọ n'ụgbọala ahụ. Ebumnuche nke damper bụ iji belata mkpọtụ ụgbọ ala. Ọ bụ akụkụ nke usoro nkwụsị. Ọ bụrụ na mmiri nke damper anaghịzi agbanwe, ọ ga-ama jijiji nke ukwuu n'okirikiri dị elu, ọ dịkwa ize ndụ karị mgbe mmiri na-ezo.
Afọ 4-7: N’ime afọ, na mgbakwunye na mmezi nkịtị, ọ dị mkpa iji dochie akụkụ ịka nká dịka roba n’ime ụgbọ ala.
Kemgbe ihe karịrị afọ anọ, ntụnyere ahụ dịka "ndị mmadụ nọ n’etiti afọ", na ọtụtụ akụkụ na akụrụngwa ga-atọpụ, ọkachasị mgbe ọsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịịsị efị nke na-agba ọsọ. N'ịbụ ndị agbakọtara n'okike nke ụfọdụ akpa roba n'ime ụgbọ ala, wdg, ọtụtụ ndị nwere ụgbọ ala na-amalitekarị ịgbanwe ụgbọala mgbe ha na-anya ụgbọala ruo afọ anọ ma ọ bụ ise, ụfọdụ ndị na-azụ ụgbọ ala na-amasịkarị ịzụta ụgbọ ala nke afọ a. N'ihi na ọnụahịa ahụ ga-adị ọnụ ala karịa ụgbọ ala ọhụrụ. Maka ụgbọ ala nke na-aga n'etiti afọ, na mgbakwunye na mmezi a na-eme, lebara anya na mmezi nke ihe ndị a:
Oge eriri agba: cargbọala nke nọ kemgbe ihe dị ka afọ anọ kwesịrị ị attentiona ntị ma a ga-agbanwe belt ahụ. Mgbe ụgbọ ala ahụ na-agba 70,000 gaa 100,000 kilomita, ekwesịrị izipụ ya ka ọ gbanwee eriri. Ọ bụrụ na-agbanweghị ya na oge, Ọ bụrụ na eriri ahụ gbajiri na mberede mgbe ụgbọ ala ahụ gbafere ọkara, ọnụ ahịa mmezi ya dịkarịa ala narị dollar.
Ọkpụkpụ roba: Ọ bụrụ n'ụgbọ a dịbeghị afọ nke ọma, nsogbu ndị dịka nzere mmanụ ojii na mgbapụta mmiri nwere ike ịdọrọ. N'ihi ịka nká nke ikuku roba ahụ, ọ ga-arụ ọrụ site n'oge ruo n'oge. Ọ bụrụ na ejiri onye nwe ụgbọ ala ahụ nwee nke ọma, nsogbu ịka nká ga-apụta ma emesịa, nke ya na ịchekwa ego.
Mmiri mmiri: vehiclegbọ nke ihe dị ka afọ ise, mmiri ọgwụ nwere ike ịmịcha mmiri n'ime ya, yabụ ụfọdụ tankị mmiri nke ụgbọ ala ahụ na-amalite ịgbaze, ọ dị mkpa ka edochi tankị mmiri.
Afọ 7-10: N’oge agadi, na mgbakwunye na mkpa iji dochie akụkụ adịghị ike na nká, ọ dị mkpa iji rụkwaa ma rụkwaa ihe ndị dị mkpa dịka igbe.
N'ihi mmachi nke ndụ ụgbọ ala ahụ, na China, ụgbọ ala ahụ kwesịrị ịla ezumike nká mgbe afọ 10 gasịrị. Ọ bụrụ na edozi ya nke ọma, ụgbọ ala ahụ ka nwere ike mezue ozi a ka atọrọ. Ma mgbe afọ asaa gasịrị, ụgbọ ala ahụ ji nwayọọ banye agadi. N'oge a, a ga-edochi obere akụkụ ahụ n'afọ nke atọ na nke anọ, dịka ihe na - eme mkpọtụ. Na mgbakwunye, imirikiti ụgbọ ala ndị na-akpụgharị onwe ha kwesịrị idozi n'oge a.
Mmezi nke nnyefe akpaka: Onye nwe ụgbọ ala na-ebufe ụgbọ ala na-ebu ihe mgbagwoju anya na nkenke gearbox. Mgbe ị na-anya ụgbọ ala na-akpaghị aka, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnya ụgbọ ala n'efu mgbe ndụ gị nọrọ n'ọnọdụ dị mma, onye nwe ya ga-akpachapụ anya ka o wee nwee ike iji gafere ihe iche. Agaghị echekwa ndozi ahụ. Nke a ga - eme ka nduwanye ọrụ onwe ya.
Nke ato, kpachara anya maka ihe akwara nke akwara nke ihe akwara nke akwara nke ugbo ala kpatara:
1, ụgbọ ala na-emetụta arụmọrụ, ụgbọ ala ahụ anaghị achọ akụkụ maka ịka nká. Ọnwụ batrị, mmanụ na-egbu mmanụ, ịka nká.
Ownersfọdụ ndị nwere ụgbọ ala na-eche na a na-ejikarị ụgbọ ala ugboro ugboro, na-agba n'okporo ụzọ kwa ụbọchị, ọ bụ ihe dị mma ịnwe ezumike, ọ ka mma ikwe ka ụgbọ ala ezumike. Ownersfọdụ ndị nwere ụgbọ ala na-eche na ụgbọ ala ahụ erughị ala ma ụgbọ ala ahụ dị ọhụrụ ma aga ere ya n'ọdịniihu. Carsgbọ ala ndị eji ere ere nwekwara ike ree maka ọnụahịa dị mma. N'ezie, nke a bụ nghọtahie. N’ezie, ụgbọala ogologo oge ga-aka ngwa ngwa karịa ụgbọ ala na-enwekarị oge.
Ihe mbu ala ụgbọ ala na-abaghị uru bụ na batrị na-enwekarị nsogbu. N'ihi na ụgbọ ala ga-chaji batrị n'oge akwọ ụgbọala, ọ bụrụ na emepeghị batrị ogologo oge, batrị ga-efufu ọkpụrụkpụ batrị ma ọ nweghị ike ịnweta chaja ọfụma. Ngwaọrụ na-ezu ohi ohi nke ụgbọ ala chọrọ batrị iji nye ya ike. Na-enweghị ike ọkọnọ, batrị ga-efunahụ ike. Ọnọdụ ahụ dịka ọnọdụ nke ahụ mmadụ riri oke ma mebisie, na-eme ka ụgbọ ala ghara ịmalite.
Carsgbọ ala na-adịghị ogologo oge yikarịrị ka ọ ga - akpata nsị mmanụ na ịka nká. Ọ bụrụ na mmanụ anaghị arụ ọrụ ogologo oge, ọ ga-emebi ngwa ngwa ma mepụta coagulum, nke a ga-eme ka injin ahụ dobe carbon. Ọ bụghị naanị na mmetụta nke lubrication na-ebelata nke ukwuu, kamakwa ụfọdụ ihe acidic ga-akpata nnukwu corrosion na akụkụ igwe ahụ. Ngwaahịa roba ndị dị ka taya na nhicha agaghị agagharị ogologo oge, nke ga-atọpụ roba ma belata ịdị ọcha, nke ga-emetụta arụmọrụ.
Maka ndị na-eme njem ma ọ bụ na-ahapụ ọnọdụ ahụ ọnwa ole na ole, ọ bụrụ na a ga-adọba ụgbọala ahụ na mpasa ụgbọ ala, ekwesịrị inwe nkwa na ọ ga-agba ụgbọ ala n'oge oge niile. Ọ kachasị mma ịga n'okporo ụzọ otu ugboro n'izu iji mee njem. Nke a ga - ahụ ụgbọ ala dị iche iche. Formancerụ ọrụ, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịme ya n'okporo ụzọ, ịkwesịrị inyefe enyi gị ka ọ lekọta ya, bido injin ahụ otu ụbọchị kwa ụbọchị, lelee ọnọdụ ọrụ injin ahụ maka abnormality, ma chajie batrị.
2, na-enyochakarị taya ahụ, n'ihi na taya na mgbanaka ígwè nke kpatara ụta naanị, ụlọ ọrụ mkpuchi agaghị akwụ ụgwọ.
Companylọ ọrụ inshọransị agaghị akwụ ụgwọ maka mbibi nke taya na mgbanaka ígwè nke ụdọ ahụ kpatara. N'ihi na ụlọ ọrụ ịnshọransị ga-elebara ụma a dị ka ihe ịtụnanya okike nke ụfọdụ akụkụ nke ụgbọ ala ahụ anya. Agbanyeghị, n'ihi ihe ọghọm okporo ụzọ nke kpatara taya, ọ bụrụ na ihe butere ya n'akụkụ okporo ụzọ ma ọ bụ ya na ụgbọala ndị ọzọ, ụlọ ọrụ inshọransị ga-ahụ maka ihe ọghọm nke ihe mberede ahụ, dịka mkpuchi mkpuchi ụgbọ ala nke atọ mkpuchi nke ndị otu na mkpuchi mkpuchi ndị ọzọ metụtara nsogbu ihe mberede ụgbọ ala kpebiri. Iji zere ọghọm na-enweghị isi, ọ dị mkpa ịlele ọnọdụ taya mgbe niile iji zere ihe ntụpọ.
3. Ọ bụrụ na ịzụta ụgbọ ala ngwaahịa, ịchọrọ usoro ndozi dị iche iche.
Ọ bụrụ na echekwara ụgbọ ala ahụ ogologo, ọ ga-enwe nsogbu ịdị mma nke ịka nká na ịkwụsị. Enwere nsogbu dị n’etiti sistemụ ụgbọ ala, dịka iburu ngwa ngwa, wdg Ọ bụrụ na enwere lubrication, enwere ike ịgba ọsọ ngwa ngwa o kwere mee. Ọ bụrụ na emeghị ya n'oge, ụfọdụ mmanu ga-eme agadi ma ọ bụ sie ike, nke ga - eme ka akụkụ akụrụngwa yikwasị. .
Na mgbakwunye, ọ bụrụ na echekwara sekit nke ụgbọ ala ogologo oge, nsogbu ga-adị n'etiti ya na ebe dị mkpụmkpụ. E kwesịrị iji okwu ndị a kpọrọ ihe nke ukwuu n'ihi na ha niile nwere mmetụta na arụmọrụ nchekwa nke ụgbọ ala.
Iji hụ na nchekwa, ọ dị mkpa ka ndị na-ere ahịa ahụ rụzie ihe ụfọdụ na ụgbọ ala ngwaahịa tupu erere ya. Na mkpokọta, ndị na-emepụta ụgbọala nwere nwekwara ndokwa maka ụgbọala ngwaahịa. N'ozuzu, mgbe ịchekwa ọnwa abụọ ma ọ bụ atọ, injin ụgbọ ala kwesịrị ịdị na-agba mgbe niile. Ọ kachasị mma iji mezie mmezi.
Tupu ịzụta ngwaahịa ngwaahịa, ndị na-eri ahịa ekwesịghị ịbụ anyaukwu maka ọnụ ala, kamakwa ịghọta n'ụzọ doro anya ogologo oge ọ ga-adị. Ọ bụrụ na ịzụta ụgbọ ala azụ, ị ga-enwe nsogbu, ma mee ihe ị ga - elezi anya na nsogbu ahụ.
Ebe o nweghi iwu doro anya banyere ihe gbasara oge eji abanye ụgbọ ala, ọ dị mkpa ka ị payaa ntị na nchekwa nke ngwa ahịa ahụ. Enwere ike inyocha oge iche iche iji hụ ọnụọgụ na ụbọchị nke arụpụtara na injin na chassis nke ụgbọ ala ahụ.
Ọ bụrụ na ịzụta ngwaahịa ngwaahịa ahụ ka ọ bụrụ ebe ikpeazụ, ị ga-agbaso oge nchọpụta ahụ iji mee nyocha nlele kwekọrọ na idozi oge tupu ị na-akwọ ụgbọala n'okporo ụzọ.
Na nchikota: ihe eji agbazi ugbo ala bu igodo ya, ma mgbe idezi ugbo ala dabere na njem nke ugbo ala ahu. Lezienụ anya n'ihe banyere ugbo ala nke ụgbọala gị, ma na-elele oge niile iji akụkụ ndị na-adịghị mma, nke nwere ike iwere, na nke ịka nká iji zere ọdịda nke ọdịda nke akụkụ akụkụ ụgbọala nkịtị. Na mgbakwunye, mgbe ị na-ahọrọ ụlọ ọrụ na-elekọta ụgbọ ala, ọ dị mkpa iji nlezianya nyochaa, yana naanị ụlọ ọrụ na-elekọta ụgbọ ala mgbe niile nwere ike iweta ọrụ ndozi dị mma.
Euler ORA qhibido oge ochie na-ege ntị nke abụọ
Mgbanwe Industrylọ Ọrụ Mgbasa omowa na-agbanwe agbanwe